ရွှေဥမင်.အတွင်းမှဆင်းတုတော်များ ………..အပိုင်းတစ် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Local Guides » ရွှေဥမင်.အတွင်းမှဆင်းတုတော်များ ………..အပိုင်းတစ်
Posted by ကိုပေါက်(မန္တလေး) on Jun 1, 2012 in Local Guides, Photography, Travel | 14 comments
1 ဓါတ်လှေခါးကနေဆင်းပြီး ရွှေဥမင်ဂူသို့အတက်လှေခါး
2 အတွင်းမှ ဆင်းတုတော်များ
3 အတွင်းနံရံ မှာပူဇော်ထားတဲ့ ဆင်းတုတော်များ
4 အတွင်းထဲက စေတီတော်.................
5 တကယ်ကိုများပြားလှတဲ့ ဆင်းတုတော်များ
6 များပြားလွန်းတဲ့စေတီတော်တွေကို လှူထားတာ တကယ်ကိုအံ့သြစရာပါ
7 အတွင်းလှိုဏ်ဂူတော်ထဲမှာ ပုံစံမျိုးစုံနဲ့ရှိနေတဲ့ဆင်းတုများ
8 ကွေ့ကောက်သွားရတဲ့ဝင်္ကပါထဲက ဘုရား
9 ၀င်္ကပါများကြားမှ ဆင်းတုတော်-------2
12 ခေါင်မိုးထက်က ကျောက်ပန်းဆွဲ
13 သဘာဝနဲ့ လူ့ဖန်တီးမူ့ရောယှက်နေတဲ့ ဂူအတွင်းပိုင်း
14 သဘာဝကြီးရဲ့ ထုဆစ်ချက်က လူဖန်တီးတာထက်လှနေပါတယ်
15 အလင်းရိပ်အောက်က ဆင်းတုတော်များ
17 ခေါင်မိုးအပေါ်ဘက်က ကျောက်ခက်တွေပါ
လူလတ်ပိုင်းတစ်ယောက်ကတော့ ဘုရားဖူးလာသူအမျိုးသမီးနှစ်ဦးကို ဘုရားသမိုင်းကြောင်း
ဘုရားအတွင်းက နံရံအောက်ခြေကစလို့ ဂူအမိုးထိတိုင်အောင်သဏ္ဍာန်အမျိုးမျိုးသောဆင်းတုများနဲ့
စေတီလေးကနေ အနောက်ဖက်ကို ထွက်လိုက်တဲ့အခါ ၀င်္ကပါလမ်းကလေးကိုတွေ့ရပါတယ်။
မျက်နှာချင်းဆိုင်တည်ထားတဲ့ ဆင်းတုတော်တွေကြားမှာ လူတစ်ယောက်သွားသာရုံလမ်းကလေး
လှိုဏ်ဂူထဲမှာ ရိုက်ထားခဲ့တာတွေအများကြီးဖြစ်တာကြောင့် အားလုံးကိုလည်းကြည့်စေချင်တဲ့
ရွှေဥမင် လှိုင်ဂူအတွင်းမှာ ဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော် ၈၀၉၄ဆူ နဲ့ စေတီပေါင်း ၁၆၄ဆူ ရှိကြောင်းပါ။
ပင်းတယ ရွှေဥမင်ကိုတော့ တစ်ခါမှ မရောက်ဖူးသေးဘူး ။
MRTV4မှာ ပြတုန်းကတော့ ကြည့်လိုက်ရတယ် ။ အင်းလေးကိုသွားဖြစ်လျှင် မဖြစ်မနေ ၀င်ဖူးရမယ့် ဘုရားတစ်ဆူပါ ။
လောလောဆယ်တော့ ခရီးထွက်ဖို့ ခက်နေတာကြောင့် ၊ သွားမယ့်ခရီးစဉ်တွေထဲ တော့ မှတ်ထားလိုက်ပါပြီ။
အခုလို ကြည့်ရတော့ အတွင်းမှာ အရမ်းမှောင်မနေဘူး လင်းသားပဲ ။ etone တို့ သွားတုန်းကတော့ အထဲမှာ မဲမှောင်နေတာပဲတဲ့ ။ အောက်ဆီဂျင်အ၀င်ထွက်အားနည်းလို့ နှလုံးရောဂါရှိသူတွေ သိပ်အကြာကြီးနေလို့မသင့်တော်ဘူးပြောတယ်(ကြားဖူးတာ) ။ ကြမ်းခင်းကလည်း ကျောက်ဆက်ရေတွေကျလို့ စိုစိစိနဲ့ဆိုပဲ ။ ကျောက်သား အရကို ရေတွေစိမ့်ထွက်နေတဲ့ ဆင်းတုချွေးထွက်ကိုယ်တော်လည်း ရှိသေးတယ်ဆို ။
လေးပေါက်ရေ .. ရွှေဥမင်ကို သမီး ကိုးတန်းနှစ်က တစ်ခါရောက်ဖူးတယ် ။
ဦးလေးက တောင်ကြီးမှာ တာဝန်ကျလို့ တစ်မိသားစုလုံး သွားလည်ရင်း ရှမ်းပြည်ဘက် ဘုရားဖူးထွက်ရာကရောက်ဖူးခဲ့တာ ။ အဲ့ဒီဘက်ကို သွားတဲ့လမ်းမှာ မှတ်မှတ်ရရဖြစ်တာက သစ်ပင်အကြီးကြီးတွေပါပဲ … အရမ်းကိုလှတဲ့ နှစ်ချို့ သစ်ပင်တွေပေ့ါ …. ။
လေးပေါက်ရေ … အဲ့ဒီဘုရားပေါ်ကို တက်ပြီးအောက်ကို ပြန်ကြည့်ရတဲ့ ဖီလင်လေး အရမ်းသဘောကျတာပါပဲ … ။ လေတွေလည်း တဟူးဟူးတိုက်ပြီး အရမ်းကို လန်းဆန်းစေတယ် …. ။ ဒါပေမယ့် ဂူထဲသွားရတာတော့ အရမ်းကြောက်တယ် … မှောင်ကလည်း မှောင် ၊ မြေသားကလည်း စိုစွတ်တော့ …. စိတ်ထဲ မရိုးမရွနဲ့ တမျိုးပဲ … ။ နောက်ပြီး သမီးက နေရာတကာ စိုးရိမ်လွန်နေတယ် … သူများတွေ ဒီလောက် ဂူထဲဝင်ဘုရားဖူးနေတာ ဘာမှ စိတ်မပူကြပဲ .. သမီးစိတ်ထဲတော့ ဂူထဲသာ ဘုရားသွားဖူးနေရတာ … ဒီဂူရဲ့ ကြံ့ ခိုင်မှုကိုတော့ စိတ်တထင့်ထင့်နဲ့ … ။ အဲ့လို နေရာတကာ တွေးပူတတ်တဲ့ အကျင့်က တမင်လုပ်ယူထားတာမဟုတ်ပေမယ့် … မြင်နေလျှင် … သံသယဖြစ်မိတာ အတော်ဆိုးတာပါပဲ … ။ ကြောက်သားတွေက ရေတွေ တစက်စက်ကျတာကိုယ်ပေါ်ကျသွားလျှင် လန့်ဖြန့်သွားတာ အကြိမ်ကြိမ်ပါပဲ … ။ မြေသားစွတ်စိုပေမယ့် … တစ်ခုကောင်းတာက … အရမ်းမုန်းစရာကောင်းတဲ့ တီကောင်မရှိဘူး … ဟီး ။
အထဲမှာ နတ်သမီးကျောက်ပြင်တို့ ဘာတို့လည်း ရှိသေးတယ်နော် … သမီးသွားတုန်းကတော့ ဓါတ်ပုံရိုက်ခဲ့ရကောင်းမှန်း နားမလည်ဘူးဆိုတော့ …. အမှတ်တရဓါတ်ပုံတွေ မရှိခဲ့ဘူး … ။
ဟူးးးးးးးးးးးးး …… ကိုပေါက်ရယ်…..လူကို ကိုရီးယားကားလိုတယ်ဆွဲဆောင်ပါလား….. အရင်ပိုစ့်တုန်းကတော့ တစ်ပုံပြီးတစ်ပုံကြည့်… လယ်ကွင်းတွေ တောင်တန်းတွေပဲမြင်….ကြည့်နေရင်းနဲ့ ဂူထဲကဘုရားဆင်းတုတော်တွေမြင်ရတော့မယ်ထင်ပြီး မျှော်လင့်ချက်နဲ့ တစ်ပုံပြီးတစ်ပုံကြည့်လာတာ…ပြီးတော့ သူကလယ်ကွင်းနဲ့တင်ဆုံးသွားတယ်…… ခုမှပဲ သူ့နေက်ဆက်တွဲကလာတော့တယ်….. မရောက်တာကြာပြီဖြစ်တဲ့ဘုရားကိုဖူးရတာ ကျေးဇူးဗျို့…..
ဆင်းတုတော်တွေက အများကြီးပဲဗျနော့ …
အားပါးတရ ဖူးမြော်သွားပါတယ် ဖေဂျီးရေ ..
သာဓု .. သာဓု .. သာဓု …
ဒီပင်းတယ လိူဏ်ဂူက အမိုးနည်းနည်းပိုမြင့်တဲ့အတွက် အသက်ရူသိပ်မကျပ်ပါဘူး။
ပိတ်ချင်းမြောင်မှာတော့ အပေါ်ဆင့်ရောက်တဲ့အခါ အတော်လေးမွန်းကျပ်ပါတယ်။
မြင်းမထိကတော့ အပြင်ကို ပြန်ထွက်မယ့် အကွေ့လေးနေရာရောက်တော့ လူမွှန်ထူလာသလိုပါဘဲ။.
ကျနော်ကြက်သီးထတယ်ဆိုတဲ့နေရာပြန်စဉ်းစားတော့ အကွေ့အဆုံးလမ်းမှာ အသက်ရူမ၀တာကြောင့်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ကျနော်ရောက်လေရာ ရာ ဒေသက ပုံတွေ ကျနော်ရွာသူားတွေမြင်ရအောင် အမြဲမှတ်တမ်းတင်ခဲ့ပါမယ်နော်။။
(2-6-2012) ရှမ်းမြောက်ကို ခရီးထွက်ပါမည်။
ဖူးသွားပါတယ် လေးပေါက်။ ရှမ်းမြောက်ကို ရောက်ရင် ဟိုတခါပြောဖူးတာလေး ဓာတ်ပုံရိုက်ခဲ့ဖို့ မမေ့နဲ့အုန်းနော်။
အားပေးတွားပါဒယ် အန်တီပေါက်ချင့် သများဂိုလည်း လက်တွဲခေါ်ပေးနော်
ကျနော်တို့ကလဲ လမ်းခရီးကောင်းအောင် လုပ်ပေးနိုင်မယ်ဆိုရင် နိုင်ငံမှာဒေါ်လှတွေလှိမ့်ဝင်လာမှာသေချာါတယ်။
မြန်မာပြည်မှာအလှတရားပေါင်းများစွာရှိတာကို နိုင်ငံခြားက ဒေါ်လှပိုင်ရှင်များသ်ိစေချင်ပါ၏။